नागरिक लगानी कोषमा बेथिति : बेरुजू नै बेरुजूको चाङ | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण नागरिक लगानी कोषमा बेथिति : बेरुजू नै बेरुजूको चाङ
on: २ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०५:२५ लेख | दृष्टिकोण
नेपाल सरकारको समेत लगानीमा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अनुसार ४०४७ चैत ४ गते नागरिक लगानी कोष स्थापना भएको हो । २०४८ माघ १ गतेदेखि कोषले औपचारिक रूपमा कारोबार थालेको हो । सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी पूँजी वृद्धिका साथसाथै लगानीका अवसरहरू बढाउन तथा पूँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउन कोषको स्थापना भएको हो । कोषको शेयर चुक्तापूँजी ९० करोड ३१ लाख रहेको छ । कोषले पूँजीबजार सम्बन्धी मर्चेन्ट बैंकरका रूपमा धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको कार्य, शेयर रजिस्ट्रारको कार्य र धितोपत्र प्रत्याभूतिको कार्यसमेत गर्दै आएको छ ।
निजामती बीमा कोष, शिक्षक बीमा कोष, सैनिक बीमा कोष, नार्क बीमा कोष, नेपाल प्रहरी बीमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बीमा कोष, अनुसन्धान बीमा कोष सञ्चालनमा छ । स्वीकृत अवकाश कोष, नागरिक एकांक योजना, पेन्सन उपदान कोष पनि यसले सञ्चालन गरेको छ । अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार २०७४/७५ सम्ममा यस्तो रकम १०,७६०.५२ करोड रकम छ ।
लगानी कोषले २०७४ असार मसान्तसम्म १४४ करोड ८८ लाख ७७ हजार ७११ रुपैयाँ बासलात रहेको सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो वासलात ११८ करोडको थियो । अधिकृत पूँजी १५० करोडको भए तापनि जारी पूँजी १०० करोड र चुक्तापूँजी ९० करोडको मात्र रहेको पाइन्छ ।
लगानी कोषको परिचय पाटो जति सरल छ, आर्थिक पाटोको इतिहास त्यति नै धेरै जटिल । अर्बौंको बचत परिचालन गर्दै आएको कोषमा आर्थिक सुशासनको देखिँदैन । यसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय मात्र हो । नागरिक लगानी कोषमा के भइरहेको छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले के प्रतिवेदन दिएको छ, मन्त्रालयलाई हेर्ने फुर्सद छैन । वर्षेनि करोडौं रकम थपिंदै गएको छ । पैसा भएको बोरा चुहिँदै गए पनि बोराको प्वाल टाल्ने चासो कसैले लिएको देखिँदैन । जिम्मेवार व्यवस्थापन कर्मचारी, सञ्चालक समिति रेल्वे स्टेशनमा बसेको सरह देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संगठित संस्था लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयले हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिँदै आएको देखिन्छ ।
सफ्टवेयर र तथ्यांक सुरक्षा सम्बन्धमा
कोषले प्रयोगमा ल्याएका कम्प्युटर प्रणालीमा पहिले पोस्टिङ गरेको रकम पछि आएर सच्याउने वा हटाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको देखिएकाले तथ्यांक सही छ भन्ने आधार छैन । साथै प्रणालीमा परीक्षण अडिट समेत गरेको देखिँदैन ।
लगानी लक्ष्य बमोजिम नभएको
कोषको कुल लगानी रकममा १९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि गरी यस वर्ष रू. ८१ अर्ब २० करोड ९९ लाख पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । तर, त्यसमा १२ प्रतिशतले कमी आई रू. ७१ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख मात्र लगानी गर्न सकेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेप लगानी बाहेक अन्य क्षेत्रको लगानी लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न सकेको देखिएन ।
सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण र लिलामी
आर्थिक कार्यविधि विनियमावली २०६८ को दफा क ३४ अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यालय प्रमुख आफूले वा भण्डारको जिम्मा लिने कर्मचारी बाहेकका अन्य कर्मचारीद्वारा जिन्सी मालसामानको भौतिक निरीक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन एक तह माथिको अधिकारीमार्फत कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्छ । तर, कोषले आव २०७३/७४ मा चल अचल सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरेको पाइएन ।
कोषको लगानी हरहिसाब फरक
आव २०७३/७४ सम्ममा कुल ७१ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ६१ हजार लगानी रहेको देखिन्छ । तर, लगानी विभागको अभिलेख अनुसार ६५ अर्ब २२ करोड २० लाख २२ हजार मात्र देखिएको छ । फरक देखिएको ६ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ३९ हजार सम्बन्धमा यकिन गरी फरफारक गरेको देखिएन ।
शेयरमा लगानी अद्यावधिक नभएको
मर्ज भएका संस्थाको विवरण अद्यावधिक नगरिएको र लगानी अनुसारको विवरणमा २ करोड १७ लाख ५० हजार कित्ता र शेयर अभौतिकरण डिम्याट अनुसारको विवरणमा १ करोड ६० लाख ०७ हजार कित्ता भएकाले फरक ५७ लाख ४२ हजार कित्ता भिडाउने कार्य गरेको देखिएन ।
मुद्दती निक्षेपमा लगानी रकम भिडान नगरेको
२०७४ असार मसान्तमा विभिन्न बैंकको मुद्दती निक्षेपमा रू. ६२ अर्ब ३० करोड मौज्दात रहेको उल्लेख छ । यो रकमको बैंकबाट समर्थन पत्र लिनुपर्नेमा यसमध्ये २२ अर्ब ४५ करोड मौज्दातको बैंक समर्थन पत्र लिएको पाइएन । समग्रमा लगानी विभागले तयार गरेको विवरणमा रू. ५६ अर्ब ३० करोड र अन्य योजनाले तयार गरेको वित्तीय विवरण अनुसार जम्मा रू. ६२ अर्ब ०३ करोड रहेकाले रू. ५ अर्ब ७२ करोड फरक भएको देखिन्छ ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा गरिएको लगानी
केही बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषित हुँदा ती संस्थामा रहेको ८० करोड २० लाख बापत जोखिम व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसमध्ये साँवा ब्याज असुल भएको विवरण खुल्ने गरी स्रेस्ता खडा गरेको छैन । साथै लेजरमा पनि असुल गरेको रकम कटाइ खुद बाँकी रकमको अभिलेख अद्यावधिक गरेको देखिएन ।
ब्याज आय असुल
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षान्तसम्मको पाकेको ब्याज रू. ६१ करोड ९९ लाख असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । भाखा नाघेको मुद्दती निक्षेपको पाकेको ब्याज असुल उपरतर्फ तदारूकता अपनाएको देखिँदैन । यसबाट बैंकहरूले लामो अवधिसम्म सो रकम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी अनावश्यक लाभ लिएको देखिन्छ । यस्तो रकमबाट हुने क्षति वापतको रकम हिसाब गरी सम्बद्ध पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्छ ।
नगद तथा बैंक मौज्दात
कोषले तयार गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकसँगको कारोवार कार्यालयको हिसाबसँग मिलान गरी बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्ने गरिएको छैन । विगत वर्षको मात्र नभएर आगामी वर्षहरूमा पनि यस समस्याको असर रहने अवस्था देखिएकोले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बचत वृद्धि अवकाश कोष कार्यक्रमको रू. १ अर्ब २६ करोड २६ लाख ३७ हजार बराबरको नकारात्मक मौज्दात वासलातमा नै नकारात्मक रूपमा देखाइएको छ । रिकन्सिलेशनको काम अद्यावधिक नभएकाले कोषको कार्यालयले राखेका बैंक खाताको मौज्दात रकम र सम्बद्ध बैंकले उपलब्ध गराएको सो खाताको मौज्दात प्रमाणित रकममा ठूलो अन्तर परेको देखिन्छ । कतिपय बैंक खाताको स्टेटमेन्ट लिएको समेत पाइएन ।
कम्प्युटर सफ्टवेयर लेखा प्रणाली
कोषले प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयरमा प्रयोगकर्ताले आफूखुशी रकम परिवर्तन गर्न सक्ने र लेखा परिमार्जन गर्ने गरिएकाले स्रेस्ताको रकम फरकफरक समयमा फरकफरक रकम सफ्टवेयरले देखाउने हुँदा रुजू हुन सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा कुनै पनि समयमा वित्तीय विवरण बदल्न सक्ने र त्यसको बारेमा लेखापरीक्षण गर्दा पत्ता नलाग्ने देखिन्छ ।
कोषले चेक जाँचको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कोषका कर्मचारीबाट रुजू नगरी सीधै लेजर खातामा प्रविष्ट गर्ने गरेको छ । यसबाट लेखा नियन्त्रण प्रणालीको न्यूनतम संहिता पनि परिपालन नभएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सोधभर्ना
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने रकम रू. १ करोड ४९ लाख शोधभर्ना लिएको छैन
अब यस तरीकासँग चलेको लगानी कोषमा सरदर ६,९०० करोड बेरुजू देखिन्छ । महालेखा परीक्षकले के गरोस्, उसको काम प्रतिवेदन बुझाउने मात्र हो । कारबाही गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय, लेखासमिति, अख्तियार दुरुपयोगले आँखा चिम्लिएपछि कसको के लाग्छ र ?
लेखक शेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक हुन् ।
भारवहन मापदण्डका बेथिति : गृह मन्त्रालयको निर्णय नै नियमविपरीत
५ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०६:४०
भारवहन मापदण्डका बेथिति : राजमार्गमा ट्राफिकको अनधिकृत कमाइ दैनिक २ लाख
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ०६:४८
दुई प्रदेशका खानेपानी कार्यालयमा रू. ५८ करोड ८३ लाख बेरुजू
३० बैशाख २०७६, सोमबार ०६:००
संसद् सचिवालयमा बेथिति नै बेथिति
३ बैशाख २०७६, मंगलवार ०८:१८